ဘလော့ကိုဖုန်းမှာဖွင့်ရင်ပေါ်သော စတိုင် ကိုပြောင်းချင်ရင် ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
6:25:00 am ဘလော့ကိုဖုန်းမှာဖွင့်ရင် 1 comment
ကဲကဲ စဖောမယ်နော် အောင်လေးအောင်မြင်ပါစေနော်
အဆင့် (5) ဆင့် ထဲနော် တော်တော် လွယ် ပါတယ်
►2. Template ကိုသွား ပါ ပုံမှာ ပြထားတယ် (1)
►3. Template ကိုရောက်ရင် ပုံကို ကြည့် (2) နှိတ် ပါ
►4. (3) တာကိုနှိတ်ပြီးချိန်း နိင် ပါတယ်
►5. (4) ကိုနှိတ် ပြီး Save လိုက်ရင်ရပါပြီ
Unknown 28 February 2014 at 07:53